Installing AiO Labs V4 on VirtualBox or VMWare - Khit Minnyo
Home / Hacking Lab / Installing AiO Labs V4 on VirtualBox or VMWare
Installing AiO Labs V4 on VirtualBox or VMWare
Khit Minnyo August 13, 2021 Hacking Lab
AiO Labs V4
AiO Labs ဆိုတာ ဘာလဲ?
AiO Labs ဆိုတာ Hacking လေ့လာသူတွေ၊ အထူးသဖြင့် Web Hacking ပိုင်းကို လေ့လာလိုသူတွေအတွက် အထူးဖန်တီးထားတဲ့ Labs တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
AiO Labs ထဲမှာ Web Vulnerability တွေ အများကြီးကို ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ စုစည်းပေးထားတဲ့အပြင် Windows or Linux or Mac ဘာကိုပဲ သုံးနေသူဖြစ်ပါစေ အဆင်ပြေစဖို့အတွက် VirtualBox or VMWare မှာ အလွယ်ကူဆုံး တင်သုံးနိုင်အောင် စီစဥ်ပေးထားပါတယ်။
Web Hacking လေ့လာရ လွယ်ကူစေဖို့အတွက် အသုံးပြုသင့်တဲ့ browser, sqlmap, metasploit, Burp Suite, DirBuster, dirb, ... စတဲ့ tool တွေကိုလည်း အသင့် သုံးနိုင်အောင် ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။
အရင် Version တွေ နဲ့ မတူဘဲ ထူးခြားတာက Labs တွေ အများကြီး ပါတယ်။ Offline ကို online လိုမျိုး လေ့လာလို့ ရမယ်။ ဒါ့ပြင် Debian နဲ့ Bodhi ဆိုပြီး ၂ မျိုး ထုတ်ပေးထားလို့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
Debian နဲ့ Bodhi ဘာကွာလဲ လို့ မေးစရာ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ အထဲမှာ ပါတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ အတူတူပါပဲ။ အသွင်အပြင်တော့ ကွာပါတယ်။
Debian ဆိုတာက Kali, Ubuntu, Parrot, ... စတဲ့ လူသိများတဲ့ Linux Distro တွေရဲ့ ပင်မ လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Kali တို့ Ubuntu တို့ ဆိုတာတွေက အဲသည် ပင်စည်ကနေမှ ခွဲဖြာထွက်လာတဲ့ ကိုင်းခွဲတွေ ဆိုပါတော့။ ဒီတော့ ဒါတွေအားလုံးရဲ့ အခြေခံက အတူတူပါပဲ။ Debian ဆိုတာ 1993 မှာ စတင်ခဲ့ပြီးတော့ ၁၉၉၆ ဇွန်လ မှာ ပထမဆုံးသော stable version 1.1 ကို ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ အစောဆုံး Open Source Linux distro ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အစောပိုင်းမှာ ပြောခဲ့သလို အသုံးများဆုံးဖြစ်တဲ့ Ubuntu လို Linux တွေက Debian based တွေ ဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ Debian သည် Kali, Ubuntu, တို့ သုံးနေကျသူတွေအတွက်လည်း ဘာမှ အထူးအထွေ လေ့လာနေစရာမလိုဘဲ သုံးနိုင်မယ့် Distro ဖြစ်ပါတယ်။ Look မှာလည်း တည်ငြိမ်တဲ့ ပုံစံ နဲ့ Cinnamon ကို သုံးထားပါတယ်။ အောက်ပါ preview မှာ Debian ပုံစံ နမူနာ ပါဝင်ပါတယ်။
Bodhi ကတော့ Bodhi Linux (ဗောဓိ Linux) ကို သုံးထားတာပါ။ ဗောဓိ ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်တော့ အထွဋ်အမြတ် တစ်ခုပါပဲ။ ခု Bodhi Linux မှာလည်း ဗောဓိညောင်ရွက် ကို main logo အဖြစ် သုံးထားပါတယ်။ Bodhi Linux ဆိုတာ Ubuntu Linux ကိုမှ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖန်တီးထားတဲ့ Lubuntu, Kubuntu, ... စတဲ့ Linux distro တွေလိုမျိုးပါပဲ။ Look မှာတော့ သူ့ Theme က mocha ဖြစ်ပြီး လှပါတယ်။ အသုံးဝင်တဲ့ function တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ Bodhi Linux ကို အောက်ပါ နမူနာ preview မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
နမူနာတွေ ကြည့်ပြီးပြီ။ ကိုယ် ဘယ် Version ကို ယူမယ်ဆိုတာလဲ သိပြီဆိုရင် အောက်မှာ download link ရှိပါတယ်။ လိုတာကိုပဲ ဒေါင်းပါ။
ဒီနေရာမှာ မှာချင်တာက ဖိုင်ဆိုဒ်တွေက မသေးတာမို့လို့ တကယ် လိုအပ်သူမှ ဒေါင်းယူပါ။
AiO Labs V4 (Debian Version) 8GB
Download AiO Labs V4 (Bodhi Version) 8GB
နမူနာတွေကိုလည်း ကြည့်ပြီးပြီ။ Debian ယူမလား၊ Bodhi ယူမလား ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာ ova file ကို ဒေါင်းယူပြီးပြီဆိုရင် Install လုပ်ပုံကိုလည်း အောက်မှာ ဆက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပျက်သွားခဲ့ရင်လည်း မူရင်း ova file ရှိနေသမျှ ပြန်သုံးလို့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ဖိုင်ကိုပဲ ယူယူ သုံးဖို့အတွက်တော့ သင့်ကွန်ပျူတာမှာ VMWare or VirtualBox ကို install လုပ်ထားပြီး ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
VirtualBox or VMWare မသုံးဖူးသေးတဲ့ Windows user ဆိုရင်တော့ VMWare က ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ VMWare က VirtualBox လို free တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခု လက်ရှိ VMWare Workstation 16 pro version အတွက် License Key တွေကို အောက်မှာ ကူးယူပြီး Licensed လုပ် သုံးနိုင်ပါတယ်။
VMWARE WORKSTATION 16 PRO LICENSE KEYS
အထက်ပါ Keys များ မရပါက
နောက်ထပ် ကြိုရှင်းထားချင်တာတစ်ခုက BIOS settings ထဲမှာ Intel or AMD အတွက် VIrtualization Technology ကို On (Enabled) လုပ်မထားရသေးဘဲ Off (Disabled) ဖြစ်နေရင် VM တွေကို power ဖွင့်လို့ ရမှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာပါ။ error ပဲ တက်ပါလိမ့်မယ်။ အဲလိုဖြစ်ရင်တော့ BIOS ကိုပြန်စစ်ပါ။ BIOS settings ဝင်ပုံက ပါဝါပိတ်။ ပါဝါပြန်မဖွင့်ခင် ခလုတ် ကြိုရှာထား။ ပြီးရင် ပါဝါဖွင့်။ ဖွင့်လို့ screen မီးလင်းလာပြီဆိုတာနဲ့ ချက်ချင်း BIOS key ကို နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သေချာအောင် လေးငါးချက် ဆက်တိုက် မြန်မြန်နှိပ်လိုက်ပါ။
BIOS key က ကွန်ပျူတာတွေ မှာ မတူဘဲ ရှိတတ်ပါတယ်။ အချို့က F2, အချို့က F12, အချို့က Esc, အချို့က Delete key ကို နှိပ်ရတာပါ။ များသောအားဖြင့်က F2 ပါ။ F2 နဲ့ စမ်းလို့ မရမှ အခြားကီးတွေနဲ့ စမ်းပါ။ အချို့သော Laptop or Notebook တွေမှာ F2 or F12 လို Function Keys တွေကို Keyboard မှာပါတဲ့ Fn ဆိုတဲ့ key နဲ့ တွဲနှိပ်ရတတ်ပါတယ်။ Fn + F2 or Fn + F12 ပေါ့။
AiO Labs Debian ကို အသုံးပြုခြင်း
Download လုပ်ထားတဲ့ ova file ကို R-click နှိပ် Open with ကနေ VirtualBox or VMWare ရွေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ continue နှိပ်ပေါ့။
နာမည်ကို မိမိနှစ်သက်ရာနာမည်ကို ပေးလို့ရပါတယ်။ Space မပါရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ပေးထားသလိုပဲ ပေးလည်း ရပါတယ်။ VM တွေ များလာတဲ့အခါ နာမည် မှတ်မိတာပေါ့။ သတိပြုရမှာက နောက်က .vmwarevm ဆိုတဲ့ file extension ကို လုံးဝ မပြင်ဖို့ပါ။ ပြီးရင် Save နှိပ်ပါ။
ဒီလိုပုံစံမျိုး VM တည်ဆောက်ဖို့ စတင်နေတာကို တွေ့ရပါမယ်။
ခဏစောင့်လိုက်ရင်တော့ Finish ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ။
Login ဝင်ဖို့က Username က root ပါ။ password နေရာမှာတော့ AiOlabs ဖြစ်ပါတယ်။ A နဲ့ O ပဲ အကြီးဖြစ်ပြီး ကျန်တာ အသေးစာလုံးတွေပါ။ မမှားအောင်ရိုက်ပါ။
Cinnamon ကို ပြင်ဆင်လိုက်တုန်းက တစ်ခု ကျန်ခဲ့လို့ ဒီလိုမျိုးပုံစံကို မြင်ရပါမယ်။ Cinnamon ကို restart လုပ်မလား လို့ မေးတာပါ။ မဖြစ်မနေ Yes ဖြေပေးဖို့ လိုပါမယ်ဗျ။ Yes နှိပ်လိုက်တာနဲ့ စ သုံးလို့ ရပါပြီ။ No ဆိုရင်တော့ ဘာမှ ပေါ်လာမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
Yes နှိပ်ပြီးချိန်မှာ ခုလို desktop မြင်ကွင်းကို မြင်ရပါမယ်။ ဘယ်ဖက် အောက်ဆုံးထောင့် (Windows မှာဆိုရင် start menu) နေရာကို နှိပ်ပြီး menu ဖော်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Hacking Tools ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဥ်အောက်မှာ start labs ကို နှိပ်ပြီး စတင် စမ်းသပ်နိုင်ပါပြီ။ browser ကိုတော့ Waterfox ကို သုံးရင် ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ Default Browser က Firefox ဖြစ်ပါတယ်။
Hacking Tool ဆိုတဲ့ menu မှာ ပါတာတွေပါ။ OK? root acc ကို တိုက်ရိုက် ပေးသုံးထားတာဖြစ်လို့ လိုအပ်တဲ့ software ထပ်ရှိလာရင် ကိုယ့်ဘာသာ ထပ်ထည့်နိုင်ပါသေးတယ်။
AiO Labs Bodhi ကို အသုံးပြုခြင်း
ဒါကတော့ Final ပြီးသွားတဲ့အခါ မြင်ရမယ့် ပုံစံပါ။
ဒေါင်းယူထားတဲ့ AiOLabs-Bodhi.ova ဖိုင်ကို R-click နှိပ်ပြီး Open With ကို ရွေးပါ။ အဲသည်မှာ VirtualBox or VMWare ရွေးပါ။ VMWare နဲ့ တစ်ခု နမူနာ ပြပြီးပြီမို့ ခု VirtualBox နဲ့ လုပ်ပြပါမယ်။ VirtualBox နဲ့ ရွေးဖွင့်လိုက်ပါပြီ။
Machine Folder တွေ၊ Base Folder တွေကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ရွေးလို့ရပါသေးတယ်။ ဘာမှမရွေးဘဲ ဒီတိုင်း import လုပ်လိုက်လည်း ရပါတယ်။ မရွေးတတ်ရင် import ပဲ နှိပ်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော်က တမင် VM လို့ နာမည်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် AiO Labs လို့ နာမည်ပေါ်မနေတော့ပါဘူး။ ဘာမှမရွေးဘဲ import လိုက်တာက ပိုအဆင်ပြေမှာပါ။ VM တွေ များလာရင် ဘယ်ဟာက ဘာလဲဆိုတာ အလွယ်တကူ ခွဲသိနိုင်တာပေါ့။
Importing လုပ်နေတဲ့ အဆင့်ပါ။ ကိုယ့်ကွန်ပျူတာ အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး ၂မိနစ်ဝန်းကျင် ကြာပါမယ်။ အင်တာနက် မလိုတဲ့အတွက် ဘေကုန်မှာ စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။
VirtualBOx မှာ AiOLabs ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ machine ပေါ်လာပါမယ်။ (ကျွန်တော်က တမင် နာမည်ချိန်းပြထားလို့ ခုလို vm လို့ ပေါ်နေတာပါ)။ အဲဒါကို select လုပ်ပြီး Start ခလုတ်လေး နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ AiO Labs ကို စတင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ VirtualBox မှာ Keyboard ရဲ့ ညာဘက်မှာရှိတဲ့ Ctrl ကို host key လို့ ခေါ်ပါတယ်။ host ဆိုရင် Keyboard မှာရှိတဲ့ spcae bar ရဲ့ ညာဘက်က Ctrl ခလုတ်ကို ပြောတာ လို့ မှတ်ထားပါ။ ဘယ်ဘက်က Ctrl က ပုံမှန် Ctrl အဖြစ်ပဲ အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
Host + F ဆိုရင် Full View Mode ပါ။ Host + C ဆိုရင် custom mode ပါ။ custom mode ကို အရင်သုံးသင့်ပါတယ်။ Full View Mode ပဲ ဖော်ကြည့်ရင် အလယ်မှာ အကွက်သေးလေးပဲ ပေါ်နေတာမျိုး (VirtualBox) မှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲလိုဖြစ်ရင် အောက်ပါအတိုင်း ဆက်လုပ်ရပါမယ်။
Settings ထဲကနေ setting panel ထဲကို ဝင်ပါ။ ပေါ်လာမယ့် setting menu box လေးထဲမှာ ညာဘက်ကို ဆက်သွားရင် Preferences ဆိုတဲ့ tab လေးကို တွေ့ပါမယ်။ အဲဒီကို ဆက်ဝင်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ပုံထဲကအတိုင်း monitor settings ထဲကို ဝင်ပါ။ ပုံထဲကအတိုင်း settings layout edditor ဆိုတာကို တွေ့ရပါမယ်။ တစ်ဆင့်စီပြထားတဲ့စာတွေကို တစ်ဆင့်စီ ပြထားတဲ့ ပုံနဲ့ တွဲကြည့်ရင် လိုက်လုပ်ရ လွယ်ပါလိမ့်မယ်။
ပုံထဲမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ VGA 1 ဆိုတဲ့ အဖြူကွက်ကလေးကို R-click နှိပ်၊ Resolution ထဲမှာ ကိုယ့် ကွန်ပျူတာ screen နဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် resolution အချိုး တစ်ခုခုကို ရွေးလိုက်ပါ။ စမ်းကြည့်ရင် ဘယ်ဟာနဲ့ အဆင်ပြေမယ်ဆိုတာ သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ခု ပုံထဲကအတိုင်း ရွေးလိုက်ပါတယ်။ ခုဆိုရင် Host + F နဲ့ Full View Mode ကို အပြည့်အသုံးချနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
Desktop screen မှာ R-click နှိပ်ရင် ခုပုံထဲကလို Labs နဲ့ ဆိုင်တဲ့ app တွေကို တွေ့ရပါမယ်။ Left click ဆိုရင်တော့ app menu (Start menu) ကို တွေ့ရပါမယ်။ root terminal လိုချင်ရင် sudo su လို့ ရိုက်ထည့်သုံးနိုင်ပါတယ်။ no need password ပါ။ လိုအပ်မှ သုံးပါ။ အကယ်၍ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် password လိုအပ်ခဲ့ပါက AiOlabs လို့ ရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်။
Installing AiO Labs V4 on VirtualBox or VMWare Reviewed by Khit Minnyo on August 13, 2021 Rating: 5